AWS 5.20 E71T-GS dia tariby miarovan-tena miaro tena izay natao ho an'ny fonosana tokana sy fehin-kibo amin'ny vy vita amin'ny vy na karbaona manify toy ny refy 20, tsy misy may. Gasless Wire E71T-GS dia matetika ampiasaina amin'ny milina fantsom-boasary 110 volt kely, manome hetsika arc malama miaraka amin'ny fika kely. Haingam-pandeha ny dia, tsara ny fidirana ary mora ny manaisotra ny kotrana.
NAOTY: Toy ny tariby miaro tena ihany, ny E71T-GS dia misy fitambaran-fluoride, izay mitaky fifantohana bebe kokoa amin'ny rivotra rehefa ampiasaina hanamboarana vy vy. Ny oksida zinc natsangana nandritra ny famafana dia tsy tokony hositrohana satria mety hiteraka tazo setroka vy. Rehefa mihodina ao anaty trano na amin'ny faritra mihidy dia alao antoka fa ampy ny rivotra.
Fiarovan-tena, tariby miorin-tsaina miorina amin'ny toerana rehetra ho an'ny fampiharana mandeha tokana. Tena tsara ampiasaina amin'ny metatra manify vy sy metaly malefaka. Haingam-pandeha ny dia ary malama ny sisin'ny las. Izy io dia manana hetsika arc malama, rakotra slag feno, fanesorana ny slag mora & fisidinana ambany. Tsy ilaina ny entona miaro. Ny fampiasana ny DC straight polarity welding ankehitriny dia mampihena ny loza ateraky ny fahamaizana. Ny fahombiazan'ny fametrahana dia ambony noho ny an'ny electrodes arc vy miaro.
Gas miaro: Gasless
Fambolena simika metaly napetraka (%)
zavatra Mn Si P S A1 de Mo Cr C V
Malagasy ≤1.75 ≤0.60 ≤0.03 ≤0.03 ≤1.80 ≤0.50 / / / /
Fitaovana mekanika amin'ny metaly napetraka
zavatra Yield Point (MPa) Faharetana amin'ny sintona (MPa) Elongation (%) Charpy V-notch fiantraikany Toughness
Temp Temp.(° C) Angovo misy fiantraikany(J) Average(J)
Malagasy ≥400 F480 F20 / / /
5.Size sy Recommended arus (DC-) ary elanelan'ny herinaratra
Size Volavolan-tsolika Ankehitriny (DC-) Hafainganana famahanana tariby
0.8MM 16 ~ 18V 100 ~ 160A 30 ~ 60
0.9MM 16 ~ 19V 100 ~ 170A 30 ~ 65
1.2MM 16 ~ 20V 120 ~ 200A 35 ~ 70
Dia. (mm): 0.8 0.9 1.0 1.2
(santimetatra) 0.030 '' 0.035 '' 0 .040 '' 0.045 ''
1kg / 5kgs isaky ny spool;
miolakolaka marina, sarimihetsika mihena ny hafanana ary afangaro anaty baoritra.
Teo aloha: Steel malefaka mikraoba vy AWS E6010
Manaraka: Kodiarana vy malefaka vy AWS E6011
Ss 304 Wire Filler Wire
Wire Filler Wire
Milentika Arc Welding Flux SJ101 sy Welding Wi ...
Wire welding tsy mifangaro varahina AWS ER70S-6
WP Pure Tungsten Electrode ho an'ny welding TIG
MIG TIG matevina welding tariby AWS ER4303 ER5356 fo ...
electrode welding, Atsofohy vy vy vy, Ss Welding Electrode, vy vy, Tsorakazo vy tsy mitovy, Kavina vy 1.5 Mm,